Mheremhere-yekudzima mahedhifoni ave chinenge chinhu chakakosha chezuva nezuva kune vazhinji vedu, kunyangwe vangave vachishandiswa kupatsanura mufaro wako wekuteerera pakufamba kwako mangwanani kana kunyudza iyo drone yendege yendege injini.
Nemaparaguru akawanda kwazvo aripo, kuwana sarudzo yakanakisa nzeve dzako harisi basa riri nyore. Mamwe mapaundi achave nekubudirira runyararo kudzimiswa, nepo mamwe achizwika zvirinani - saka kutsvaga nzvimbo yepakati kunogona kunetsa.
Takatora zvatinoda uye tikatora izvo zvatinofunga kuti ndiyo yakanakisa mari mbiri inogona kutenga parizvino, kuita kuti sarudzo ive nyore kwazvo.
Kupfuura-nzeve kurira-kudzima mahedhifoni
Bose Noise Inodzima Mahedhifoni 700
Funga nezve ruzha-kudzima mahedhifoni uye mikana iwe uchafunga nezvaBose. Iyo kambani ine nyowani isiri-yekupeta mureza: inonzi mahedhifoni 700.
Kunyangwe izita rekufungidzira, idzi tangi-dzekunze dzinounza hunhu hwekufungidzira zvakanyanya kukwikwidza kumakwikwi akanakisa kunze uko. Uye iyo yakawanda-nhanho-kurira-kurira-kongiri kuri kukirasi-inotungamira
Kune zvakare smart smart mubatanidzwa weakakura matatu (Google, Amazon, Apple), yakasimba app yeakasiyana maitiro (asi hapana EQ, zvinosuruvarisa), uye zvakanaka-zvakabatanidzwa zvekubata-based kudzora pane kurudyi earcup.
Hatigone kufunga nezve mamwe mapaviri isu atinoda kutora nzendo dzedu. Bose is boss kana zvasvika kune ruzha-kudzima.
Verenga iyo Bose NC Headphones 700 wongororo
Sony yakagadziridza mahedhiyo e1000X makore matatu mutsetse, ichitora nzira seyakaomeswa nekutangwa kwechigadzirwa sezvakaita nekucheka ruzha rwekunze. Dhizaini tweaks inowedzera kunaka uye kunatsiridza kune aya mahedhifoni, nepo chitsva-uye-chikuru-chip chipyu chinopa wekutadza kudzima ruzha rwakawanda.
Mhedzisiro yacho ndeyekunakisa, iine 1000XM3 kwete kungonzwika yakakura seti yemusoro, asi zvakare kuve mamwe eanoshanda zvakanyanya pakurwisa ruzha rwekunze kuburikidza nemazera anosarudzika.
Aya magaba anopawo Google Mubatsiri kudzora nekabhatani pinda - kuipa mirairo kana kubvunza mibvunzo - asi isu hatifunge kuti yakanyatsoitwa, izvo ndezvega kushaya simba kwayo mune ino smart mahedhifoni. Oo, uye vaviri veBose (pamusoro) vane dhizaini yakawanda isina musono.
Verenga wenyaya ye WH WH-1000MX3
Bowers naWilkins hapana mutorwa kumutambo wekuteerera; kambani yeBritish-based yanga ichienda kubva muna1966, uye yavo yechikuru ye ANC, yePX, yaive iri mukurumbira pane iyi runyorwa. Saka patakazvinzwa zvichizovasanganisa netekinoroji nyowani, zvakachengeteka kutaura nzeve dzedu dzakatsemuka. Patakangozviisa munzeve dzedu, tarisiro yedu yaive, zvinoshamisa, yakapfuurwazve.
Iyo PX7 mahedhifoni anotaridzika kwazvo, uye anonzwika kunyangwe zvirinani. Kuchenesa ruzha rweB & W kuri pamusoro pekirasi yayo, uye kuwedzera maficha senge aptX Adaptive rutsigiro inoita kuti zvive nyore kuteerera zviitiko uye zvirinani ramangwana-proofing. Chaizvoizvo zvinoorora, zvakare, mahedhifoni akatonyanya kugadzikana kupfuura nakare kose, achiitira iro reroto mushandisi ruzivo.
Kunyangwe ivo vangangodaro vasina kugara pamusoro chaipo peedu runyorwa, aya mapara anokatyamadza zvakanyanya, usakanganisa, uye uchave nechokwadi chekuvada kana ukavatora.
Verenga iyo Bowers & Wilkins PX7 ongororo
Beats Studio 3 Wireless inogona kukwikwidza kune varidzi ve iPhone kupfuura avo vanoshandisa foni yeApple, chete nekuti ndevamwe vevava vaviri vaviri kuti vabatsirwe neApple W1 chip (iyo yakatsiviwa neiyo H1 chip, kuenda kumberi) . Izvi zvinoreva kuti magaba aya anoedza otomatiki kuyananisa neiyo iOS chishandiso kana uri chinhambwe, uye kamwe pairi zviripo kuti ubatanidzwe ipapo kubva kune mamwe maApple madivayiri uchishandisa iyo imwechete account yeICloud.
Iyo Studio 3 Wireless ine hunyanzvi hweruzha-kudzima tekinoroji pabhodhi zvakare. Iyo inogara ichiyera maruzha akakukomberedza - kusvika zviuru makumi mashanu pasekondi - uye inogadzirisa zvese ruzha-kudzima uye ruzha zvinoenderana, kuti uve nechokwadi chekuti uri kuwana ruzha runonyanya kuputika munzeve dzako.
Ruzha rwunoderera bass-teki iwe ungatarisira kubva kune ino kambani yemusoro zvakare, asi ichine simba, nepo hupenyu hwebhateri huchingoenderera mberi uye zvichingoenderera mberi.
Verenga iyo Beats Studio 3 Wireless wongororo
Iyo B&O BeoPlay H9i ndeimwe yemapara anodhura emheremhere-yekudzima mahedhifoni kunyaradza nzeve dzedu, asi mukudzosa aya makani anopa mwero wepamusoro wekunyaradza, nekuda kwezvinhu zvemhando yepamusoro.
Kuzadzikisa iyo inonakidza yekuvaka mhando isingaite mhando rezwi - uye aya mahedhifoni anozvishandura pachawo kupfuura epakutanga H9s. IH9i yakawedzera kugona-kudzima kugona, ichidzikisa makapu enzeve zvishoma, nokudaro ichivaita iwo mashoma anoshanda.
Iine hupfumi hwemakwikwi pamitengo yakaderera, iyo B&O BeoPlay H9i inoda kuita zvakawanda kururamisa mutengo wavo wekubvunza, asi isu tinoshandisa izvo zvakawedzerwa kuvaka uye kunyaradza. Kana iwe uchida chaizvo yakasimba ruzha-kudzima, zvisinei, saka tarisa kune iyo Bose (pamusoro) yeiyo zvachose 'yakavharirwa-mukati' mhando.
Verenga B & O BeoPlay H9i ongororo
Mazhinji emakani ari pane ino runyorwa kusvika zvino ane chimwe chinhu chakafanana - ivo vane mutengo wakakomba. Zvino, Sennheiser yakakura HD 450BT haina kunyatso kudhura, asi ivo vanodhura uye vanopa ruzha rwakanyanya pamutengo wakaderera. Iwe unowana hupenyu hwakareba hwakareba hwebhatiri kuti uende neiyo yakanaka nhanho kuteerera, uye ivo vakanyatsogadzikana kupfeka, futi.
Uyezve, kudzimiswa kweruzha kunogona kunge kusinga gadzirise, asi ichiri kushanda uye inopfuura zvakakwana kuti vanhu vazhinji varasike mumimhanzi yavo na. Isu takanyatso kufadzwa neiyo HD 450BT, uye tine chivimbo kuti vaizoita sarudzo yakanaka kune chero munhu ane bhajeti rakaomarara zvishoma.
Verenga iyo Sennheiser HD 450BT ongororo
Microsoft Surface Mahedhifoni
Ok, saka hatidi huru Windows-akadai marogo padivi peaya mahedhifoni… asi Microsoft yakamboita stellar basa neyekutanga bash pane peya mahedhifoni, nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana.
Kutanga kumusoro, magaba aya akasununguka panzeve kwenguva refu yekupfeka. Chechipiri, nzeve mbiri dzinotenderera - kuruboshwe kwenzwi rekudzima ruzha, kodzero yevhoriyamu - iyo inopa yakakura, yakasikwa nzira yekudzora mahedhifoni pasina kuda mabhatani asingatarise kana kuomarara.
Asi pane kusakwana: tinoda kuona mamwe mavara anonakidza uye dhizaini, pamwe neayo akasimba ANC padanho repamusoro kukwikwidza Bose (kuwedzera kumusoro), pamwe nemhando dzakasiyana siyana dzeANC senge iyo Sony (kumusoro kumusoro). Izvo zvakati, kana iwe uchida kusununguka, inogara kwenguva refu uye nyore-kudzora mahedhifoni eANC saka usatarise Surface - kuti kana usingashandisi Microsoft laptop / 2-in-1 kana kwete!
Verenga iyo Ongororo yeMusoro mafoni
Yechokwadi isina waya isina ruzha-kudzima mahedhifoni
Sony yakashandisa hunyanzvi hwekuteerera kuruzha-kudzima ma-nzeve mahedhifoni zvakare. Isu takaona izvo zvingaitwe nekambani nekaviri-nzeve, saka takave netarisiro dzakasimba dzakakura dzeiyo isina waya-mune-nzeve modhi - ikozvino mune yechitatu-gen fomu.
Aya waya asina waya ari-munzeve anounza ruzha rwakanyatsokwana rwusina kunyanyisa kana kujeka; takaona kuti zvakaringana. Ruzha-kukanzura kwakangofanana, zvakare, kunyatso kuvharira kunze hum hum dhiramu rehupenyu hwezuva nezuva, pamwe nendege uye ruzha rwechitima.
Sony haisiriye ega mugadziri wekushambadzira neakazviratidzika asina waya mahedhifoni ane ANC - Apple iripano zvino, uye isu nguva pfupi yadarika takaedzawo Libratone Track Air + in-nzeve (ona pazasi) - asi iyo WF nhepfenyuro ine maitiro, swagger uye mimhanzi. izvo zvakaoma kurova.
Verenga wongororo yeSony WF-1000X
Mune dzimwe nzira Apple yakatora nguva yayo kusvika mukudzima ruzha, kunyangwe budiriro huru yeAirPod dzayo isina chimiro ingangove yakazvipa imwe nguva yekushanda nayo. Iyo AirPods Pro inowedzera mashandiro pakupedzisira, zvakadaro, uye mune imwe kudonha swoop yagadzirisa izvo zvingangodaro zviri zvinhu zviviri zvakakura zvevanhu nemakutu ayo.
Chekutanga, ivo zvino vanokwanisa kukwana kure kure nzeve, nhatu nzeve dzemasutu dzekutora kubva panzvimbo peyekare maAirPods "tariro ivo vanokodzera" nzira. Chechipiri, iyo yakanakisa ANC Apple yakashandiswa zvinoreva kuti iwe unogona kunyatsovimba neAirPods Pro kuti inzwike kunyangwe pakunyanyisa kufamba.
Nediki shina madzinde kupfuura kare, naivowo havanyatso kuoneka kupfuura nakare kose, dhizaini-chenjera, uye ita sarudzo huru, kunyanya kana uri mushandisi we iPhone. Iyo yekukurumidza uye yakavimbika pairing inobatsira sekugara.
Verenga iyo AirPods Pro yekutanga kuongorora
Master & Dynamic MW07 Uyezve
Kuwedzera ANC kune ayo MW07 nzeve dzakaratidza humbowo hwakakwana kubva kuna Master & Dynamic - iyo MW07 Plus yakakwira kumusoro kuti ive imwe yeanodiwa edu mairi echokwadi e-wireless earbuds.
Isu tinonyatsoda dhizaini yavo yakasarudzika, uye ivo vakagadziridzwa hupenyu hwebhatiri hunovaita ivo mutambi mukuru chaiye. Izwi rezwi rakanakisa, richipa ruzivo rwakatsetseka kuti uende nepunchy, mabass anonakidza, uye ANC inobatsira kana iwe uri mundege kana zvitima nezvimwe zvakadaro. Kutaura chokwadi, chisimbiso chinopihwa nemahedbuds chakaringana zvekuti hauwanzo kuchida.
Chokwadi ndechekuti iko kusununguka kwekushandisa kweAirPods Pro kunogona kuvaita kuti vakwane zviri nani kune vashandisi ve iPhone, nepo ruzha rwaSony rusingaenzaniswi, asi MW07 Plus ndiyo sarudzo yakajeka mune iri kuwedzera kukwikwidza chikamu chemusika.
Verenga iyo Master & Dynamic MW07 Plus ongororo
Libratone Track Mhepo +
Sezvo mu-nzeve mahedhifoni anoenda, ichi chigadzirwa chinonzwika chakasarudzika, chinogadzikana kupfeka, chinopa ziya-proof proof kuvaka kune iwo anoshanda zvikamu, uye ruzha-rwekudzima sisitimu iyo inechokwadi zvechokwadi.
Munyika mune iyo so-so AirPods inoita seinowana kutarisisa kwese, kana kure pricier Sony uye Sennheiser zvigadzirwa vanogashira zvimwe zvinonzwika-mhere-mhere-kubuda, Libratone yaita zvayakananga kumira pachena kubva muchaunga.
Mutengo wega uchave wekukwezva kukuru. Asi handicho chete chikonzero chekutenga Mhepo + - aiwa, iwe uchazoda kuzvipa izvi munzeve dzako nekuti zvese zvinopihwa, kubva kurira kusvika kunyaradzo kugona, zvinounzwa padanho repamusoro.
Verenga iyo Libratone Track Air + wongororo
Mune-panzeve ruzha-kudzima mahedhifoni
Ruzha-kudzima hakuna kungochengeterwa pamusoro-nzeve mahedhifoni, sezvo isu tave kutoona tekinoroji ichiwana nzira yayo kupinda mune-nzeve mamodheru futi. Iwo akanyanya kunaka vaviri vatakawana kusvika parizvino ndeye Bose QuietControl 30. Kwete izvi chete munzeve zvinoratidza chete rakanakisa ruzha maficha seyaBose mamwe mahedhifoni modhi, asi ruzha-kudzima kune hunyanzvi zvakare.
Unogona kunyatso tarisa ruzha rwekunze iwe rwaunoda kuvharidzira kunze kwekushandisa shamwari, saka kana iwe uri muchitima, semuenzaniso, iwe uchazoda iyo tekinoroji kuti iendeswe kumusoro, asi kana iwe ' re kuchovha uye iwe unoda kuziva nezve zvakakukomberedza ipapo iwe unozozvidhonza pasi zvishoma kuti ruzha rwudarike. Mukuita, inoshanda zvakanyanya uye ndiyo yakanakisa muenzaniso yeruzha-kudzima yatakasangana nayo mune mbiri-munzeve.
Vamwe vangawana kuti mitsipa yekugadzira haina kugadzikana, asi vapihwa nguva yakakwana yekujairanisa neichi dhizaini, isu tinofunga kuti Bose inogadzira yeavo-akakwana mahedhifoni kutakurira pamwe newe.
Verenga iyo Bose QuietControl 30 wongororo
Iyo Libratone Track + inopa yekabandband-dhizaini seti yemusoro mahuremu ayo akareruka, akangwara uye akajeka akagadzirwa. Nepo ruzha rwemhando yepamusoro uye ruzha-kudzima hunyanzvi hunowanzowanikwa kune ese mahedhifoni pane urwu runyorwa, ndiyo yakajeka dhizaini iyo inofanirwa kutarisisa.
Yakanyatsoenzana ndiyo marongedzero avo uye izvo zvine chokwadi, saka kunyangwe iwe uchipfeka izvi pakufamba kwako, kana kumhanyisa gumi, aya mahedhifoni anogara akasununguka achigara kwaanofanirwa kuita.
Uye zvakare, iko kurira-kurira kwakanaka, kuchipa kwakasiyana matanho uye, kuburikidza neapp, unogona kuita izvi nekushanduka zvichienderana nekufamba kwako. Iyo mhedzisiro ndeyakanyanya kushanda uye yakagadzikana seti yemusoro, semhare pane yako nzendo seye pane yekumhanya track.
Kana iwe uchida kudzikisa waya zvachose saka tarisa kune iyo Mhepo +, inoonekwa pamusoro.
Verenga iyo Libratone Track + wongororo
Kana iwe uchinyanya kunetsekana nezve hupenyu hwebhatiri asi uchiri kuda iyo imwechete kukunda mubatanidzwa weSony ruzha uye ruzha-kudzima, usatarise kupfuura iyo iyo WI-1000X. Izvi zviri-munzeve, seBose QC30, shandisa dhizaini yemutsipa - iyo inonyatsogadzikana uye imwe yausingazotarise panguva yekuteerera.
Kunge yavo WH- uye WF- hama, iyi WI- maviri ane maseru pabhodhi kuti aone zvauri kuita kana kwauri uye gadziridza iro ruzha ruzha uye ruzha-kudzima saizvozvo. Kune zvakare yepamusoro-resolution odhiyo rutsigiro kana iwe uine mafaera akadaro, asi kana usingaite izvi mune-nzeve zvinokwidziridzwa, nepo zvakaenzana zvigadziriso zvinogona kugadziridzwa mukati meye shamwari app. Google Mubatsiri achauya mune ramangwana kugadzirisa zvakare.
Tungamira pamusoro apa nehupenyu hwemaawa gumi-bhatiri uye iwe uine yako yakanaka darn yakanaka ruzha-kudzima mukati-nzeve, iyo yatinokurudzira nemoyo wese kana iwe wakanaka neyakagadzirwa nebhandi.
Verenga wongororo ye Sony WI-1000X
Apple pamusoro-nzeve misoro: zvatiri kuda kuwona kubva kune rumored StudioPods
PSB M4U 8 kuongororwa: Inonyanya kurira-kuregedza headphones yevanopolisi
Skullcandy Crusher ANC musoro wongororo: Noise-kudzima mahedhifoni ane inorema bass control